China Astrazeneca 7inch obere akwụkwọ mkpuchi azụmaahịa vidiyo na kaadị azụmahịa azụmaahịa Nrụpụta na orylọ Ọrụ | VideoBrochure
Mpempe akwụkwọ azụmahịa azụmahịa Astrazeneca 7inch nwere obere azụmaahịa azụmaahịa kaadị kaadị azụmahịa
Vidiyo na Kaadị: Broshọ vidiyo nwere ike ịgụnye bọtịnụ vidiyo onye ọ bụla, dịka igwu egwu / nkwụsịtụ, olu elu, olu olu, ogbi, vidiyo na-esote, vidiyo gara aga, ọsọ ọsọ ọsọ, weghachi, weghachite, gbanyụọ na ihe ngosi mmịfe (ihe onyonyo) ).
Mpempe akwụkwọ vidiyo (nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ dị ka vidiyo vidiyo, TV na kaadị, ma ọ bụ mkpọ vidio) na-enye usoro ikpo okwu dị ike nke iji nyefee ngosipụta ọtụtụ mgbasa ozi zuru ezu.
Site na ijikọta broshuọ ndị e biri ebi na teknụzụ ihuenyo LCD, ị nwere ike igwu ma gụọ ozi ahịa gị na-enweghị eriri, ohere ịntanetị ma ọ bụ nchedo nche n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Nkebi Aha Ahaziri ebipụta 7inch lcd video broshuọ maka mgbasa ozi
Tụkwasịnụ Type OEM / ODM
Ngosipụta Nha 2.4inch, 4.3inch, 5inch, 7inch, 10inch
Dị vidiyo MP4,3GP, AVI MOV, ANI, wdg.
Picturedị foto BMP, JPG, JPEG, wdg.
Usoro egwu MP3, WMA, PCM, wdg.
Gbanye / gbanyụọ Light mmetụta, Igwe Ọdụdọ mgba ọkụ, ngagharị ihe mmetụta, push bọtịnụ
Akwụkwọ Size A4, A5 ma ọ bụ ahaziri size
Ojiji Branddị Mgbasa Ozi, Onyinye Azụmaahịa, Wedkù Agbamakwụkwọ, Nkwalite Ahịa
Styledị ngwaahịa Na-agbasi ike
Video mkpebi HD vidiyo kachasị 1920 * 1080 kacha nta 320 * 240.
Ngwaahịa ngwaahịa video broshuọ
Izi ezi ozi
Ihuenyo Mpaghara Ngosipụta Ihuenyo Mkpebi Batrị Oge ọrụ
2.4 Inch TFT LCD Ihuenyo 48mm * 36mm 4: 3 320 * 240 320 ~ 24000mA > = 2hour
4.3 Inch TFT LCD Ihuenyo 94mm * 53mm 16: 9 480 * 272 320 ~ 24000mA > = 2hour
5 Inch TFT LCD ihuenyo 110mm * 61mm 16: 9 480 * 272 320 ~ 24000mA > = 2hour
5 Inch IPS ihuenyo 107mm * 64mm 16: 9 800 * 480 320 ~ 24000mA > = 2hour
7 Inch TFT LCD ihuenyo 152mm * 85mm 16: 9 800 * 480 320 ~ 24000mA > = 2hour
7 Inch IPS ihuenyo 152mm * 85mm 16: 9 1024 * 600 320 ~ 24000mA > = 2hour
10 Inch TFT LCD ihuenyo 221mm * 124mm 16: 9 1024 * 600 320 ~ 24000mA > = 2hour
Egwuregwu vidio: Enwere ike ịrụ ọrụ site na mbido akpaaka na mmeghe, ngbanwu / ngbanwu, ihe mmetụta ọkụ, ma ọ bụ, ihe mmetụta ngagharị. Ruo awa 4 nke vidiyo nwere ike ịchekwa na broshuọ otu.
Ebe nchekwa na Oge Egwuregwu Egwuregwu (naanị atụmatụ na nduzi): 128Mb (ruo 7min), 256Mb (ruo 15min), 512Mb (ruo 30min), 1Gb (ruo 60min), were gabazie *** Oge egwuregwu bụ isiokwu ka video mkpakọ na usoro eji.
Ike batrị: Lithium Polymer na-agbanye 500mAh na 1hour na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Batrị ike ka elu ruo 8000mAh dị na arịrịọ.
Mkpọchi: on / gbanyụọ, vidiyo họrọ, kpọọ / kwụsịtụ, esote / FF, prev / REW, olu elu, olu ala. Ruo ihe karịrị 10 bọtịnụ ga-ekwe omume na broshuọ vidiyo naanị.
Ihuenyo Njikere (ikwommiri): ọ na-abụkarị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe ngosi ngwaahịa dị ka JPEG nke ga-egosipụta maka 1-2 sekọnd ebe vidiyo ahụ na-agbanye, na-ezo aka dị ka Splash screen, ma ọ bụ, ihe oyiyi JPEG nwere ike ịnọgide na njikere ruo mgbe ahọpụtara vidiyo vidiyo.
Nke gara aga: Mercedes Benz Car Video Broshọ & Kaadị, LCD ihuenyo Kaadị, A4 hazie Printing maka Car Nkwalite
Osote: ASS ahaziri 10 anụ ọhịa ọkọlọtọ video katalọgụ broshuọ kaadị azụmahịa ọrụ n'akpa uwe ọrụ maka mgbasa ozi azụmahịa
Mgbasa BMW Car 7 inch LCD Video Broshọ H ...
Fast 10W Car Ikuku chaja N'ihi iPhone 8 Plus ...
multimedia mmetụta electronic lcd video invitati ...